Iyo nyowani vhezheni yeGlimpse 0.2.0 inounzwa uye uku ndiko kuchinja kweichi forogo cheGIMP | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeGlimpse 0.2.0 inoratidzwa uye uku ndiko kuchinja kweichi forogo cheGIMP
Munguva pfupi yapfuura Iyo nyowani vhezheni yemifananidzo yakajeka Glimpse 0.2.0 yakaunzwa, umo a akateedzana shanduko ane hukama nekubvisa GIMP brand mareferenzi, pamwe nekuitwa kweyepfupi keyboard uye zvirongwa zvePhotoGIMP, icon redesign uye nezvimwe.
Kune avo vasingazive nezveGlimpse vanofanira kuziva izvozvo iyo forogo yeiyo GIMP chirongwa mushure memakore gumi nematatu ekuyedza kugutsa vashanduri kuti vachinje zita.
Vagadziri veGlimpse vanotenda kuti kushandiswa kwezita rekuti GIMP hakugamuchirwe uye zvinoita kuti zvive zvakaoma kuendesa muparidzi mumasangano edzidzo, maraibhurari eruzhinji uye marongero emakambani, nekuti izwi rekuti "gimp" rinoonekwa sekutuka mune mamwe mapoka emagariro evatauri veChirungu uye zvakare ine chirevo chisina kunaka chakabatana neiyo BDSM subculture.
Vagadziri veGIMP vakapindura kune zvikumbiro zvavasina kufunga kushandura zita uye kuti mukati memakore makumi maviri ekuvapo kweprojekti, zita rayo rave kuzivikanwa zvakanyanya uye rinosanganisirwa munzvimbo yemakomputa ne graphic edhita (pakutsvaga muGoogle, zvinongedzo zvisina hukama nemifananidzo yemifananidzo zvinowanikwa kwekutanga chete papeji 20 yemhinduro dzekutsvaga.)
1 Main nyowani maficha eGlimpse 0.2.0
2 Dhawunirodha uye gadza Glimpse paLinux
Main nyowani maficha eGlimpse 0.2.0
Mune iyi vhezheni itsva yeGimp Fork, yakagadziridzwa kune iyo GIMP 2.10.18 kodhi base (iyo yapfuura vhezheni yaive yakavakirwa pana 2.10.12) uye faira zita shanduko, shanduko yechiratidzo, dhairekitori zita shanduko uye kuchenesa kwemushandisi interface.
Nezve shanduko dzakabatanidzwa tinogona kuzviona akawedzera mapfupi ekhibhodi uye PhotoGIMP zvirongwa zvepurojekiti, Iyo inovandudza kuchinjwa kweGIMP kupa iyo Photoshop-yakafanana nechitarisiko.
Uyewo, zviripo icon seti zvakagadzirwazve, se kutsiva iyo GIMP logo neiyo Glimpse logo uye yakakwira musiyano icon seti yakagadziriswa kune zvedu zvido.
Chikamu chikuru che kugadzirisa uye kugadzirisa zvine chekuita nerutsigiro rwekushanda papuratifomu yeWindows, kusanganisira iyo nyowani nyowani ine G'MIC fomati inosanganisirwa.
Iyo BABL 0.1.78, GEGL 0.4.22 uye MyPaint 1.3.1 uye LibMyPaint 1.5.1 mapakeji anoshandiswa sekunze kwekunze (MyPaint brush rutsigiro rwakavakirwa mukati).
Kana iri iyo kunatsiridza kwekuvandudza shanduko dzinotevera dzakabatanidzwa:
Bug inogadzirisa neshanduro dzakapfuura.
Wakawedzera zviito zveGithub zvekunyora uye kurongedza dev-g210, beta-g210, uye glimpse-0-2.
Isu tinogadziridza zvinyorwa zvedu uye tinogadzira mabasa kuti utore matanho matsva ekuvaka emesoni
Inosanganisirwa intl.dll ine kodhi yekodhi yekubatsira maitiro ekupakata Windows
Iyo HACKING.md faira yakagadziridzwa neiyo nyowani yekuvaka maitiro.
Iwo maREADME.md mafaera akapihwa muiyo-aux dhairekitori akagadziridzwa zvakare
Yakadzingwa babl, gegl, mypaint-brushes, uye libmypaints git zvinyorwa zvinopa zita chete
Vagrant Kurumidza Kutanga Maitiro akaratidzirwa kuderedzwa uye Anogona akabatanidzwa panzvimbo.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa ruzivo mune iyo inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha uye isa Chidimbu pane Linux
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi forogo yeGIMP munzira yakajairika muLinux vanogona kuzviita nerubatsiro rweSpap kana Flatpak mapakeji. Ivo vanofanirwa chete kuve nerutsigiro rwekuisa aya marudzi emapakeji pane yavo system.
Muchiitiko cheSnap, ingo nyora mune iyo terminal:
Zvino, mune izvo zvevaya vane Arch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero chimwe chinobva kuArch uye vasingade kushandisa nzira dzakapfuura, vanogona kuisa uyu mupepeti kubva kuAUR.
Kune izvi, ivo vanongoda chete kuti repository igoneswe uye ive neAUR wizard yakaiswa, iyo semuenzaniso mune ino kesi tinoshandisa YAY:
Chekupedzisira, mune yekuvhuraSUSE Tumbleweed vashandisi, ivo vanofanirwa kuwedzera inotevera repodhi kune yavo system:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeGlimpse 0.2.0 inoratidzwa uye uku ndiko kuchinja kweichi forogo cheGIMP
Zvizhinji nezveLinus Torvalds. Iyo Linux yakagadzirwa
HBO Max inosiya vashandisi veLinux vakarembera, isu tinotarisira chete izvozvi